Yaadoota wardiilee keessaa
Yeroo yaadannoo man'eetti qabsiiftuu balbaloon bakka barruu kee galchuu dandeessuutti mal'ata. Arfakuu xiqqaan xiyyoo mirga guubaa keessa mallattoo man'ee qubannoo yaadannootti. Yaaydannicha dhaabbiidhaan agarsiisuuf, man'ee mirga cuqaasuun Yaadannoo Mul`isifili.
Yaadannoo haquuf, man'ee mirga-cuqaasi, ittaansudhaan Yaadannoo Haqi fili.
Barruu galmeewwanii keessatti yaada irraa gara yaadaatti naana'uu